Sidee looga ciiday Puntland,, Filo Sawiro Quruxbadan iyo warbixin – SBC
Sidee looga ciiday Puntland,, Filo Sawiro Quruxbadan iyo warbixin
Dhamaan Magaalooyinka waaweyne ee gudaha Dalka Soomaaliya ayaa maanta siweyn loogaga oogay Salaadii Ciidul Adxa iyadoona ay isugu soo bexeen goobo fagaare yaal ah dadweynaha Soomaaliyeed iyo Masuuliyiintooda.
Magaalooyinka waaweyn gaar ahaan kuwa kuyaala Deegaanada Puntland ayaa ay siweyn ugu soo bexeen dadweynaha goobo fagaare ah, iyagoo kor u qaadaya Tagbiita Ciida iyagoo labisan dhar aad iyo aad u bilic quruxsan si ay munaasabada ciida isugu qurxiyaan,
Goobahaasi ayaa sidoo kale waxaa ku sugnaa saraakiil sar sare oo ka tirsan Xukuumada Puntland iyagoona kagala qeybqaatay Salaada kana jiidinayay Qudbado dhinacyo badan taabanaya oo ku saleysan Ciidka Maanta.
Magaaladan Boosaaso Xarunta gobolka Bari ayaa waxaa lagu oogay Salaada ciida goobo waaweyn oo ku yaala magaalada sida masaajidyada waaweyn iyo masalayaal kale .
Masalihii ugu weynaa ee lagu tukaday magaaladan Boosaaso islamarkaana ay isugu soo bexeen shacab iyo maamul waxaa uu ku yaalaa dhanka bari ee magaalada gaar ahaan goob dhanka qorax u dhaca ka xigta madaxtooyada Boosaaso.
Dad weyne aad iyo aad u tiro badan oo kumanaan gaaraya aya halkaasi isugu soo baxay iyadoona ay ka mid ahaayeen dhinacyada kala duwan ee Bulshada, waxaa halkaasi markii lagu tukaday salaada ciida ka jeediyay qudbado kala duwan, culimaaudiinka, masuuliyiinta degmada kuwa gobolka iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada oo halkasi kusugnaa.
Filo sawiro aad u quruxbadan oo aan ka soo kala qaadnay magaalooyinka Garoowe Boosaaso iyo Qardho…
Magaalada Qardho Xarunta Gobolka Karkaar Ayaa maanta si aad ah loogaga ciiday iyagoona ay shacab iyo maamul isugu soo bexeen masale ku yaala dhanka koonfureed ee magaalada halkas oo ay ku oogeen salaada Ciidul adxaa.
Noofember 6, 2011 at 8:17 am
WAAD KU MAHADSANATIHIIN SBC HAWSHA AD U HAYSAAN UMADA SOMALIYED GAAR AHAAN KU WA REER PUNTLAND HALKAA KA WADA
WALIBA MAANTA WAXAAN JECLAAN LAHAA INAAN IDINKALA QAYBQAATO FARXASDA OO AAD ISOO WACDAAN WAXAAN ARDAY SOMALIYED OO JOOGA WADANKA SUDAN TELL 00249901584619